Shariif Xasan “Maalmaha soosocda Baay iyo Bakool waa gacanta Dowlada” – SBC
Shariif Xasan “Maalmaha soosocda Baay iyo Bakool waa gacanta Dowlada”
Posted by Webmaster on Febraayo 21, 2012 Comments
Dowlada KMG ah ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in Ciidamo ka tirsan DKMG ah kuwo Itoobiyaan ah iyo kuwo Ahlusuna ahba ay ku sii jeedaan gobolada Baay iyo Bakool oo ay gacanta ku hayaan Xarakada Shabaab Almujaahidiin.
Gudoomiyaha Baarlamanka DKMG ah ee Soomaaliya Sharif Xasan Sh Aadan ayaa la hadlay Laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxaanu sheegay in Maalmaha soo socda Alshabaab laga saari doono gobolada kor ku xusan siiba gobolka baay oo ay iminka qeybo ka mid ah Deegaanadiisa gacanta ku dhigeen ciidamada Itoobiyaanka ah iyo kuwa DKMG ah.
Waxa uu sheegay gudoomiyuhu in lagu rajoweynyahay in maalmaha soo fooda leh ay dowlada KMG ah Gacanteeda soogeli doonaan labadaasi gobol, isagoona taasi ku tilmaamay mid ay dowladu dadaal ugu jirto.
Waxa uu ugu baaqay Dadweynaha degen goboladaas iyo kuwa kasoojeeda ee Dibadaha ku noolba in ay soo dhaweeyaan ciidamada DFKMG ah islamarkaana u muujiyaan taageero iyo midnimo,
Waxa uu ku eedeeyay Xarakada alshabaab in ay dhibaatooyin waaweyn u geysteen dadka deegaanka iyagoona dadkaasi ka qaxay deegaanadii ay degenaayeen islamarkaana loo baahan yahay in ay ku soo laabtaan si ay uga howlgalaan beerahoodii iyo xoolahoodii.
Shariif Xasan Sh Aadan gudoomiyaha Baarlamanka ee ay sheegeen xildhibaanada qaar ee DKMG ah in ay xilka ka qaadeen ayaa sidoo kale difaacay soogelitaanka ciidamada Itoobiya ee dalka isagoona tilmaamay in ay kaalmo tahay wasababta ay dalka u soo galeen.
Dhinaca kale wararka ka imanaya isla gobolka Baay waxay sheegayaan in qarax xoogleh uu ka dhcay duleedka degmada Bardaale ee gobolkaas, kaasi oo ay ku geeriyoodeen dad rayid ah oo rakaab ahaa.
Dhimashada ayaa la sheegay in ay kor u dhaafeyso 6 qof dhawacuna uu yahay mid intaasi laba jibaara,
Wararka waxay intaasi ku darayaan in qaraxan dhacay uu ahaa mid ka dhashay miino dhulka lagu aasay oo gaariga ay saarnaayeen dadkaasi uu ku istaagay sida ay xaqiijiyeen dad halkaasi ku sugan..